VAROTRA SY FANJIFANA : « Handraisana fepetra ireo mampiakatra vidin’entana tsy amin’antony »
Nisy ny filan-kevitry ny minisitra, tamin’ny alarobia 04 septambra lasa teo. Voalaza tao anatin’izany fa tsy maintsy handraisana fepetra ireo fanararaotana sy fampiakaram-bidy tsy amin’antony ireo entana ilaina andavanandro, amidy eny an-tsena. 6 septembre 2019
Mila tsirihina, hoy ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, ireo mpanafatra entana, ka arahi-maso sy hadihadiana ny tahirin’entana na ny any amin’ny seranan-tsambo izany na ny any amin’ireo fitehirizan’entana lehibe. Misy amin’ireo mpamongady mantsy no manitrika entana ka manararaotra mampiaka-bidy rehefa miha lany ny tahiry eny an-tsena. Tsy maintsy angataham-panazavana ihany koa ireo anton’ny fiakaram-bidy nefa mbola tsy mbola miditra amin’ny fotoanan’ny maitso ahitra akory isika amin’izao fotoana.
Notsipihin’ny Filoham-pirenena tao anatin’ity tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ity ihany koa fa « Ilaina ny manaja ny fitsipiky ny fifaninanana madio mba ho tombontsoan’ny mpanjifa. » Azo atao tsara ny mifaninana satria amin’ny alalan’io fifaninanana io no hahafahana mampifandanja ny tena vidin’ny entana iray.
Nandritra ny roa herinandro tokoa izay, nikaikaika ireo mpanjifa entana eny an-tsena noho io fiakaram-bidy tsy fantatra loatra io. Rehefa nanontaniana mahakasika io fampiakaram-bidy io ny mpivarotra sy mpaninjara dia nilaza fa ireo mpanafatra entana miainga avy any amin’ny seranan-tsambo mihitsy no mampiakatra izany, ka tsy maintsy manaraka izy ireo mba tsy hivarotana fantiantoka.
Tamin’ny ankapobeny, fiakarana manodidina ny 10 isan-jato eo ho eo no hita tamin’ireo vidin’entana teny an-tsena. Samy niaka-bidy avokoa na ireo fitaovana fampiasa andavanandro na ireo fitaovana hafa toy ny fanaingoana trano. Misy amin’ireo mpivarotra ihany koa no mampiakatra izaitsizy io vidin’entana io rehefa maheno amin’ireo mpivarotra namany fa nisy nampiakatra tany ho any na tsy mbola lany akory aza ny tahiriny teo aloha.